फेसबुक, ट्विटर र गुगलले किन दिइरहेका छन् पाकिस्तान छाड्ने धम्की? :: Setopati
एजेन्सी कराँची (पाकिस्तान), मंसिर ८
फेसबुक, ट्विटर र गुगलजस्ता ठूला सूचना तथा प्रविधि कम्पनीले पाकिस्तान छाड्ने धम्की दिइरहेका छन्।
भारतीय अखबार टेक हिन्दुस्तानका अनुसार पाकिस्तान सरकारले सामाजिक सञ्जालका लागि कठोर नयाँ नियम घोषणा गरेसँगै कम्पनीहरूले देश छाड्ने कुरा गरेका हुन्।
पाकिस्तानले बनाएको नयाँ नियमअनुसार त्यहाँका सरकारी अधिकारीलाई यस्ता सामाजिक सञ्जाल र अन्य डिजिटल विषयवस्तुहरू सेन्सर गर्न सक्ने पूर्ण शक्ति दिइएको छ। यसले सूचना तथा प्रविधि कम्पनीहरू आफ्ना विषयविस्तु धेरै नियन्त्रित हुने भन्दै आक्रोषित भएका हुन्।
पाकिस्तान सरकारले आफ्नो देशमा सामाजिक सञ्जाल कसरी चल्नेछ भनेर केही नियमहरू बनाएको छ। यो नियम ‘अवैध अनलाइन सामग्री हटाउने र अवरुद्ध गर्ने नियम २०२०’ इलेक्ट्रोनिक अपराध निवारण ऐन २०१६ अन्तर्गत बनाइएको छ।
नयाँ नियम अन्तर्गत सामाजिक सञ्जाल कम्पनीहरूका लागि एक अनुसन्धान एजेन्सी नियुक्त गरिनेछ। यसले सामाजिक सञ्जालमा भएका सामग्री पढ्न र बुझ्न योग्य छ वा छैन हेर्ने टेक हिन्दुस्तानले लेखेको छ।
गत बिहीबार पाकिस्तानको अंग्रेजी अखबार ‘डन’ सँग भएको अन्तर्वार्तामा ‘एसिया इन्टरनेट कोलिसन’ले इन्टरनेट कम्पनीलाई लक्षित गरेर बनाइएको यो नियम उनीहरूका लागि खतरा भएको बताएको थियो।
प्रविधि कम्पनीहरूका अनुसार यी नियमले ‘एसिया इन्टरनेट कोलिसन’का सदस्यलाई पाकिस्तानी प्रयोगकर्ता र व्यवसायका लागि सेवा उपलब्ध गराउन अत्यन्त गाह्रो हुनेछ। यो नियममा अनलाइन तथ्यांकहरू स्थानीयकरण पनि गर्नुपर्ने हुन्छ। यी आवश्यकताहरूले सर्वसाधारणको निःशुल्क र खुला इन्टरनेट पहुँच क्षमतालाई हानी गर्ने टेक हिन्दुस्तानले बताएको छ।
यसले गर्दा पाकिस्तानको डिजिटल अर्थव्यवस्था विश्वका बाँकी देशबाट पनि बन्द हुने ‘एसिया इन्टरनेट कोलिसन’को भनाइ छ।
प्रकाशित मिति: सोमबार, मंसिर ८, २०७७, १६:१०:४६
ट्वीटर भेरिफिकेसन फेरि सुरू भयो, कसरी आफ्ना अकाउन्ट भेरिफाई गर्ने?
सामसङको एस२१ सिरिज नेपाली बजारमा
४८ मेगापिक्सल क्यामरा भएको सामसङको फोन, के छन् अन्य विशेषता?
आइओएस–१५ को नयाँ अपडेटले पुराना आइफोनमा काम नगर्ने